Sive site Sekola Dasar, Bali, Indonesia " Journey-Assist - Diving
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Sive site Sekola Dasar
Toeram-pisitrahana Sekolah Dasar. Diving any Bali
Ity toerana antsitrika ity dia miorina amoron'ny morontsiraka avaratra andrefan'ny nosy Penida ary manana tarehin'ny haran-dranomasina lehibe midadasika mankany amin'ny ranomasina. Eto ianao dia afaka mahita trondro isan-karazany sy karazana haran-dranomasina maro. Misy onja mahery eo akaikin'ny tranokala, noho izany dia tsara indrindra ho an'ny mpanam-pahaizana za-draharaha izy io ary tsy mety amin'ny vao manomboka.
"Sekola Dasar" amin'ny fiteny eo an-toerana dia midika hoe "sekoly ambaratonga voalohany". Ny anarana nohafohezina ny tranokala dia mifandray mivantana amin'ny fianarana - SD. Tena misy sekoly kilasy fanabeazana fototra eo akaiky eo.
Tsy mora ny fepetra antsitrika manakaiky ny nosin'ny Nusa Penida. Tsy milamina ny morontsiraka eto noho ny vatosokay sy ny lava-bato any anaty rano. Mikoriana eo akaiky eo ny reniranon'i Indonezia, ka izany no mahatonga ny onja any akaikin'i Nusa Penida matanjaka hatrany. Ny rano dia mikisaka miankandrefana mankany amin'ny nosy kelin'i Cheningan, ary atsinanana atsinanana, akaikin'ny tranokala Sekola Dasar.
Toetra mampiavaka ny tranokala:
Halalin'ny - 5-30 m.
Ny fahitana dia 10 ka hatramin'ny 40 m.
Ny mari-pana amin'ny rano dia manomboka amin'ny +25 ka hatramin'ny 26, indraindray dia midina hatramin'ny +18.
Mahery ny Mazava ho azy fa tsy dia antonony matetika.
Amin'ny alàlan'ny sambo irery ihany ny fidirana.
Ny toerana fisitrihana dia ao anaty rano amin'ny halalin'ny 4 m, avy eo ampidinina lalindalina kokoa ny rindrina (45 degre ny zoro fahaketrahana). Ny tapany ambany dia tsy mbola nodinihin'olona tamin'io fotoana io. Nidina tany amin'ny halalin'ny 40 m ny mpisitrika. Ny rindrin'ny haran-dranomasina amin'ny ilany andrefana dia fehezin'ny seranan-tsambo, amin'ny ilany atsinanana - vodionitra fotsy Betsaka ny triatra, ny hakiviana ary ny zohy kely ao.
Ny foibe fisitrihana akaiky indrindra dia ny any Padang Bai, Sanur ary Nusa Penida. Mitovy ny vidiny: ny antsitrika 2 miaraka amin'ny fanofana fitaovana dia hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 200 rupees.
Address: JL. Melaya, Gilimanuk, Gilimanuk, Denpasar, Kabupaten Jembrana, Bali 82252, Indonezia
Sabotsy - 7.00-19.00
Alahady - 7.00-19.00
Dive site Sekolah Dasar
Dive site Sekolah Dasar on the map